Lokhu slot Elk studios inikwa amandla yi liphakathi Slots Kuhle nge No Idiphozithi adingekayo ngesikhathi yekhasino yethu. Kusekelwe i ugly isihloko Bull-fighting.The ezemidlalo kuyaziwa Spain lapho owesilisa eyaziwa ngokuthi i-matador izimpi-off i inkunzi langempela. I Onjiniyela laligqoka phezu izigqoko zabo ukucabanga phezu umqondo futhi bavela nale slot. Akungabazeki ukuthi ngempumelelo baye iwine izinhliziyo eziningi yini noma cha abadlali bathandile mdlalo eziyihlazo.
Elk studios wangena umkhakha e 2012 futhi ngempela entsha emkhathizwe isofthiwe amageyimu. Lokhu slot phakathi Slots Kuhle nge No Kudingeka Idiphozithi akhiwa lo njiniyela kanye Bloopers, DJ Wild futhi Taco Brothers. Kuningi imidlalo mnandi kulindeleke ukuthi akhiwa lo njiniyela.
Umdlalo kunamekwe 5 reels. Uphawu zasendle is Toro ezibhalwe ngesiNgisi e izincwadi yellow. I chitha iyona uthukuthele matador uphawu nge amadevu kancane. Kubonakala kuphela 2nd, 3rd futhi esondweni 4th. Uphawu ibhonasi iyona Bull Toro okubonakala kuphela esondweni 5th. Amatshwayo njalo kukhona zegolide, isiliva zethusi fan enkulu ezihlotshisiwe kanye orange sephulwe kanye imbali ebomvu. I Bull Toro uba endle Ukuhamba mdlalo futhi njengoba ihamba nendawo kuya kwesokunxele, uphendulela osakaza matador ukuba symbols.The zasendle uphawu wasendle awukwazi esikhundleni sokuchitha Matador noma ibhonasi Bull Toro uphawu.
Landing 3 matador uyahlakaza e engabangela Matador Respin Challenge ngawe nge 3 khulula kabusha osebenzisa. Lapho Ukwedlula osakaza ivele itolitji ngesikhathi kabusha osebenzisa round, eminye kabusha osebenzisa buthelela. Umjikelezo iphela uma uphawu zasendle liyavela itolitji.
Gameplay kanye nemiphumela izithombe senze lokhu slot Kuhle Slots nge No Kudingeka Idiphozithi. I slot is ekubambeni nokunakwa abadlali emhlabeni wonke ikakhulukazi ngenxa ezithakazelisayo yayo ukuhamba wilds sici. Khona-ke kukhona Yebo osebenzisa free kanye multipliers lokuqoqa ukukhokhelwa ngawe. On futhi Wild Toro kwenza i ibhizinisi ezikhangayo futhi ukudlala nge Elk studios futhi evuna Slots Kuhle nge No Kudingeka Idiphozithi.